Syk1224 4 Qalabka Daabacaadda Midabaynta Dhimista Qalabka Mashiinka
Waxyaabaha korantada ugu muhiimsan dhammaantood waxay la qabsadaan sumcad caan ah. PLC xakamaynta, shaashadda taabashada midabada leh, beddelaha soo noqnoqda.
Qalabka gudbinta wuxuu qaataa 40 Cr, 20GrMo Ti steel tayo sare leh oo la shiiday, iyo daaweynta kuleylka kadib ， wuxuu gaari karaa ilaa lix · Axdi
★ Qaab dhismeedka Symmetrical wuxuu kaloo rakibi karaa labo xirmo oo warqad ah isla waqtigaas ， Waraaq ayaa loo isticmaali karaa joogsi la'aan shaqo ； Waxay korsataa wadista farsamada si ay u dhameystirto xajinta xaashida, qaadista, dabacsanaanta, horay u socoshada, dhaqdhaqaaqa tarjumaadda, iwm.
★ mid kasta · Axdi
★ Adoo adeegsanaya qaab-dhismeedka daboolka nuugga, wuxuu la mid yahay mashiinka cadaadiska sare ee xoog leh. Ku nuugida aamusiyaha., Isha hawada iyo focux xakamaynta korantada isla miiska hawlgalka, masaafada ka fog mootada kama yaraeyso 1.5m, dhinaca howlgalka ayaa daboolay dabool buuxa.
★ bas · Axdi
★ qaado qaabdhismeedka nuugista daboolka ， la jaan qaada cadaadiska sare ee taageere awood leh. Gaas
Qalabka korontada iyo korontada si ay diiradda u saaraan isla hawlgalka,
dhinaca qalliinka daboolka buuxa ayaa xiran.
★ Tuurista cusbi tayo sare leh thickness dhumucda derbiga 200mm。Adopt indepen · Axdi
Hal waji SF-320E (360E)
★ Rullaluistemadka jiingada ugu weyn ￠ ￠ 320mm fl Sida loo bixinayo biibiile way kala duwantahay rol rol Rullaluistemadka cadaadiska ￠ 370mm rol Duubista preheat ￠ 400mm.
Hal waji SF-360C1 (405C1)
Features Sifooyinka qaabdhismeedka ： ★ qaataan qaabdhismeedka daboolka nuugga, cadaadiska sare ee taageere awood leh. Nuugista aamusnaanta, bixinta gaaska iyo kabadhka xakamaynta korantada si ay diiradda u saaraan isla hawlgalka ， oo ka fog martida ayaan ka yarayn 1.5m.Marka dhinac ka hawlgala wuxuu daboolayaa dabool buuxa。 ★ salka iyo qaabdhismeedka birta lagu dhejiyay, dhumucda darbigu waa 200mm。 Sanduuqa marshada madaxbannaan, qaabdhismeedka gudbinta wadajirka ah ee guud. ★ wax rullaluistemadka jiingado korsado 48CrMo steel daawaha, dhexroor rullaluistemadka rooga weyn ee ...
Hal waji SF-405E
★ rullaluistemadka biibiilaha ugu weyn ： ￠ 405mm （sida ku xusan biibiile way kala duwan yihiin） rol Rullaluistemadka cadaadiska ￠ 495mm rol duubitaanka preheat ￠ 400mm.
★ iyadoo la adeegsanayo naqshadeynta cadaadiska xun, isticmaalka kuleylka oo hooseeya, waxay ka caawineysaa warqadda aasaasiga ah inay si siman u cadaato oo ay ugu dhowdahay dusha sare ee rullaluistemadka jiingadda, & n · Ax
Hal waji SF-500
★ rullaluistemadka corrugating ugu weyn ￠ （500mm （Sida biibiilaha ku kala duwan yihiin rol rol Rullaluistemadka cadaadis ￠ 600mm rol duudduuban preheat ￠ 600mm。
★ iyadoo la adeegsanayo naqshadeynta cadaadiska xun, isticmaalka kuleylka oo hooseeya, waxay caawisaa warqadda muhiimka ah
in si siman loo cadaadiyo oo loo dhawaado dusha duudduuban jiingado
Waji laba-geesood ah SM-E2
★ dusha saxanka kulul waxaa lagu shaabadeeyey shiidi, balaca saxanka kulul 600mm ， Wasiirka qaboojinta 5m.
★ Saxanka kulul waxaa laga sameeyaa koontaroolka weelka, shahaadada weelka cadaadiska ku lifaaqan iyo shahaadada kormeerka。 Qalabka kuleylka ee gudaha ee loogu talagalay
Waji laba-geesood ah SM-F
★ Dusha sare ee kuleylka kuleylka adigoo shiidaya daaweyn width saxan kulul oo balaaran 600mm.
★ Guddiga preheat waxaa laga sameeyaa boodhka weelka, iyadoo la raacayo heerka qaran ee weelka cadaadiska, oo lagu lifaaqay shahaadada weelka cadaadiska iyo kormeerka
Waji laba-geesood ah SM-10
★ Dusha sare ee kuleylka kuleylka iyadoo la shiidiyo daaweyn, balaastikada balaastiga dhererkeedu yahay 600mm, wadar ahaan 12 saxan kululeynta iyo qaboojinta 4 m.
★ Taarikada kuleylka leh soo saarida guddiga konteenarrada, si waafaqsan ta qaranka
heerarka markabka cadaadiska fasalka, weel cadaadis leh · ··